सामूदायिक वनमा ब्यापक अनियमितता, वन कर्मचारी रमिते मात्र – Nirantarkhabar
सामूदायिक वनमा ब्यापक अनियमितता, वन कर्मचारी रमिते मात्र
निरन्तर डेस्क, बेलबारी । पूर्वी मोरङका केही सामूदायिक वनमा वन पदाधिकारीहरूले जथाभावी सालका ठाडा रुख काट्न थालेको समाचार प्राप्त भएको छ । जिल्ला बन कार्यालय विघटन हुन लागेको बेला बन कर्मचारीको प्रत्यक्ष सहयोगमा सामूदायिक वनका पदाधिकारीहरूले मन खुसी रुख ढाल्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । पछिल्लो पटक पूर्वी मोरङका ग्रामीण सुधार सामूदायिक वन कानेपोखरी–७ र पशुपति सामूदायिक वन पथरीशनिश्चरे १० ले जिल्ला वनले दिएको कटान आदेश भन्दा बढी लकडी जङ्गलबाट ल्याएर घाट गद्दी गरेका छन् । बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण सुधार सामूदायिक वन जिल्ला कै सबैभन्दा ठूलो सामूदायिक वन हो । ग्रामीण सुधारले अहिले धमाधम काठ कटान गर्दै घाटगद्दी गरिरहेको छ । तर उपभोक्ताको माग भन्दा बढी कटान आदेश ल्याएको ग्रामीण सुधारले आफ्नै कार्यलय परिसरका दुईवटा सालका रुख जेसीवी लगाएर ढालेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार गत बैशाख ३ गते दिउँसो ३ बजे तिर बनका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल र वर्तमान अध्यक्ष नवीन राईले जेसीवी लगाएर रुख ढालेको प्रत्यक्षदर्शीले निरन्तर खबरलाई बताए । उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने – शौचालयको सेफ्टी टेङ्की खन्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको जेसीवीले ठेलेर रुख ढालेको हो । न हावा हुरी, न आँधी बेँहरी अचानक रुख ढलेपछि हाम्रो सातो गयो । छिनभरमा दुईवटा रुख ढले ।’
समाचार स्रोत भन्छ, “रुख ढाल्ने निर्णय कार्य समितिको बैठकमा भएको छैन । जिल्ला बनको स्वीकृति समेत लिइएको छैन ।कार्य समितिका कतिपय पदाधिकारी रुख ढलेको विषयमा बेखवर छन्। पूर्व अध्यक्ष पौडेलले यसअघि पनि उक्त रुख ढाल्ने प्रयास गरेका थिए । तर उसबेला वर्तमान अध्यक्ष राई र पौडेलको पानी वारावारको अवस्थामा पौडेल रुख ढाल्नबाट पछि हटेका थिए ।
जिल्ला वनको सहमति बिना किन ढालियो रुख ?
यस्तो कहानी झण्डै ५ वर्ष अघि पौडेल वनको अध्यक्ष थिए । अध्यक्ष छँदा उनले भलुवा सिमसारको विकास गर्ने र त्यस क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक ल्याउने योजना बनाए । पौडेलको योजनामा साक्षी किनारामा सही छाप गर्ने पहिलो ब्यक्ति थिए , हालका अध्यक्ष नवीन राई र लक्ष्मण राई पनि । सामूदायिक वनले उसबेला ८ लाख रुपियाँ सिमसार निर्माणमा खर्च गरेको थियो भने जिल्ला विकास समितिले ४ लाख रुपियाँ भलुवा सिमसारका लागि छुट्याएको थियो । त्यस बाहेक सिमसार परिसरका लगभग २५ वटा ठाडा रुख बिक्री गरेको पैसा पनि सिमसार निर्माणमा नै खर्च भएको थियो । तर उक्त सिमसार निर्माणका क्रममा भएको हिसाव अझै फरफारक भएको छैन । तत्कालिन अवस्थामा कानेपोखरी–रङ्गेली सडकको काम गरिरहेको जिभिआर निर्माण कम्पनीका जेसीवी र स्कावेटर प्रयोग गरी रातारात सिमसार परिसरलाई झट्ट हेर्दा राम्रो पारियो । तर, त्यहाँ भएका झण्डै २५ वटा ठाडा सखुवाका रुखको हिसाव किताव अझै उपभोक्ताले खोजिरहेका छन् ।
अझ रोचक र महत्वपूर्ण विषय जीवीआरका स्कावेटर र जेसीवी रातारात धम्की पूर्ण शैलीमा लगेर काम गरे पनि पौडेल र राईद्वयले उक्त कम्पनीलाई पैसा भुक्तान नगरेको जीवीआर कम्पनीले निरन्तर खबरलाई बताए । झण्डै एक महिना लगाएर सिमसार बनाइए पनि सिमसार पूर्वाधार सम्पन्न बन्न सकेन । त्यहाँबाट निकालिएका काठहरू बिक्री गर्ने क्रममा लेनदेन नमिलेपछि पौडेलसँग असन्तुष्ठ उनका केही कार्यकर्ताले पौडेलले बिक्री गरेको काठ प्रहरी लगाएर पक्राई दिए । तत्कालिन समितिका उपभोक्ता र सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ परेको काठ सिमसार परिसरबाट निकालिएको काठको सयको एक भाग पनि थिएन । त्यसपछि सामूदायिक वनका तत्कालिन अध्यक्ष पौडेल मुद्धाको सामना गर्न बाध्य भए । पौडेललाई मुद्धा पनि लाग्नु र जिविस, सामूदायिक वनले विनियोजन गरेको जम्मा १२ लाख रुपियाँ पनि बैठक, यातायात ,पाहुना सत्कार र पान मदिरामा सकिएपछि संखुवासभाबाट आएका लक्ष्मण राई रातारात फरार भए । उनी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन । सिमसार छेउछाउका काठ बिक्रीबाट प्राप्त पैसाले सिमसारलाई सौन्र्दर्यीकरण गर्ने केही काम भयो । तर त्यही बीचमा स्थानीय केही उपभोक्तासँग पौडेल आफैंले झण्डै १५ लाख रुपियाँ सिमसारको बिकासका लागि भनेर ऋण लिएको बताउन थाले । बनलाई मुद्धा लागेपछि मुद्धा लड्न पौडेलले उक्त रकम ऋण लिएको जानकारहरू बताउँछन् ।पौडेलले काठ बेचेर त्यो ऋण तिर्ने सर्त गरेका थिए, तर उनको योजना बीच मै तुहिएपछि पौडेलले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै उक्त रकम तिर्न सकेका छैनन । पटक पटक तागेता गर्दा पनि पौडेलले ऋण नतिरेपछि सामूदायिक वनको आगामी वर्षको कार्यक्रममा नै उक्त ऋण तिर्न १० लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । तर,पौडेलको बद्मासीले सामूदायिक बनलाई ऋण लागेका भन्दै कार्यसमितिले तिर्न नमानेपछि पौडेल कै योजनामा दुई वटा रुख काटेर बिक्री गर्ने योजना बनाइएको हो । समाचार स्रोत भन्छ– राई रुख काट्ने पक्षमा थिएनन । तर,पौडेलले आँट दिएपछि राईले ‘ओके’ गरेका हुन् । सामूदायिक वन परिसरका दुई वटा रुख एकाएक नाटकीय रुपमा ढलेपछि अहिले पौडेल र राईको टाउको दुखाई भएको छ । पौडेलले आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई फोन गरी यो घटनालाई साम्य पार्न निर्देशन गरेका छन् । समाचार स्रोतले भन्यो पौडेल निकट एक युवकले वन कार्यालय परिसर वरिपरिका लाई फोन गरेर चैत २७ गते दुई वटै रुख हावाले ढालेको भन्न लगाएका छन् ।
उता सामूदायिक वनका अरु पदाधिकारीहरू रुख ढलेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । एक उपभोक्ताले नाम गोप्य राखिदिने सर्तमा भने–‘रुख शौचालयको सेफ्टी टेन्की खन्न बैशाख ३ गते ल्याइएको जेसीवीले ढालेको हो । रुख ढालेको देख्ने र ढाल्दै गरेको तस्विर आवश्यक परे उपलब्ध गराउन सक्छु ।’ रुख ढालेको बिषयमा सेक्टर बन कार्यालय बेलबारीका प्रमुख सत्रुधनलाल देबले भने रुख जेसिबी लगाएर नै ढालिएको हो र ढालिएको बिसयमा सम्बन्धित बनलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढायिएको बताए । ग्रामिण सुधार सामुदायिक बनका अध्यक्ष नबिन राईले भने हावा हुरीले रुख ढालेको र आफुलाई फसाउनको लागी केहि कारबाहीमा परेका उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा उपभोक्ताहरुले झुटो अफबा फैलाएको बताए ।
उता पथरीशनिश्चरे १० को पशुपति सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि २ हजार ६ सय ७१ किवि लकडी कटानको आदेश ल्याएर झण्डै ५ हजार किवी लकडी काटेको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला वन कार्यालय मोरङले ०७४ फागुन २१ गते पशुपति सामूदायिक वनलाई सालका ३६ वटा र अन्य जातका १० वटा रुख कटानको आदेश थियो । तर बन समिति र सेक्टर बन कार्यालय मंगलबारेका सहायक वन अधिकृत तारिणीप्रसाद चौधरीको मिलेमतोमा तोकिए भन्दा बढी काठ कटान भएको खुलेको छ । चौधरीको आशीर्वादमा काटिएका टुनामा लगाइएको टाँचाका आधारमा पनि घाटगद्दीमा ५ हजार किवी भन्दा बढी लकडी भएको जानकारहरू बताउँछन् । तोकिए भन्दा बढी कटान भएको रहस्य सार्वजनिक भएपछि गत शुक्रबार बिहानै देखि चौधरी आफै लागेर प्रत्येक टुनामा ५ देखि १० किवी सम्म कम नापजोखाको अंक लेखेर कटान अनुसारको परिमाणमा कटान भएको पुष्टि गर्न लागेका छन् । यसै बीच वनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै ६६ जना उपभोक्ताले यही सोमबार छानविनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दर्ता दर्ता गरका छन् । उपभोक्ताहरूले उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,प्रदेश नं. १ का वन मन्त्री,जिल्ला वन कार्यालय,क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयलाई दिएको छन् ।
यति मात्रै होइन ,सामूदायिक वनले अघिल्लो समितिका सचिव कृष्ण घिमिरेसँग भुक्तान लिन बाँकी २ लाख २७ हजार ९७९ रुपैयाँ ७२ पैसा अझै असुल गर्न सकेको छैन । समाचार स्रोत भन्छ–बन पदाधिकारीहरूले धेरै जसो रकम समितिकै जिम्मामा राख्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कागज मिलाउँदै खर्च गर्दै गर्ने गरिएको छ । नगर क्षेत्र भित्र साना ठूला गरी १५ वटा बैंक र झण्डै ५५ वटा सहकारी संस्था छन् । यद्यपि सामूदायिक वनले बैंक मार्फत आर्थिक कारोवार नगरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । नगरपालिकाको वार्ड नं. १० का अध्यक्ष सागर राईले समेत सामूदायिक वनमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। उनले आर्थिक अनियमितता भए नभएको छानविन गर्न सरोकारबाला निकायसँग माग समेत गरेका छन् ।
नगर प्रोफाइलको तथ्याङ्क संकलन सुरु
बन कर्मचारीको सेटिङमा कटान आदेश भन्दा १८ सय २० किवी बढी काठ काटियो
हत्या गरिएकी बेलबारीकी रमिलासँग मिल्दाे शव कोशीमा फेला पर्यो, यकिन गर्ने प्रयास गरिँदै